Iskaashi Blogging Corporate Video 1: Douglas Karr
Rocky Walls iyo Zach Downs ka Laba iyo toban Xiddig Media u soo degay xagga Highbridge xafiiska iyo fiidiyowga la duubay ee Chantelle iyo aniga oo ah fiidiyowyo dhowr ah oo aan dooneynay inaan dhigno Talooyin Blogging Corporate goobta.
Tani waxay ahayd kulan fantastik ah. Waxyaabaha ku jira midkoodna lama qorin ama lama aqbalin. Waxaan dib u eegnay hadafyadeena kahor toogashada:
Waxaa jira laba fiidiyow. Chantelle waxay diirada saareysaa 2 ka mid ah goolasha fiidiyowgeeda aniga waxaan diirada saarayaa 2 ka mid ah goolasha aniga igu jira. Waxaan soo bandhigi doonaa fiidiyaha Chantelle galabta ama waad ka daawan kartaa Talooyin Blogging Corporate. Rocky wuxuu sameeyay wareysiga (waxaad ogaan doontaa inuusan dhab ahaan ka muuqan muuqaal fiidiyow ah!) Kadibna wuxuu naga caawiyay inaan sifeyno jawaabaha dhowr jeer oo mid walba qaadanayo. Natiijada dhamaadka, oo ay weheliso xoogaa tafatir ah oo cajiib ah, ayaa ahayd shaqadii ugu fiicnayd ee aad kor ku aragto!
Tags: 12 xiddigaha warbaahintablogging shirkadahablogging shirkado loogu talagalay dummiesdouglas karrsaxarowiley
Kordhinta Mawduuca si loo dhiso kalsooni